StartingaLaw Firm Out of Law School With No Money – A Complete Guide (2) | Phoe Phyu & Associates
HomeBlogsPhoe Phyu's blogStartingaLaw Firm Out of Law School With No Money – A Complete Guide (2)
အနောက်နိုင်ငံတွေက Law Firm တွေဟာ ပုံပါကဲ့သို့သော အဆောက်ဦးကြီးများနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြတဲ့ တကယ့်အားကျစရာတွေမို့ မိတ်ဆွေတို့ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အကယ်လို့ မိတ်ဆွေက US မှာ Law firm လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ အဓိက စဉ်းစားစရာက Office facility တွေ၊ အဲဒီ facility အတွက် တပ်ဆင်တာတွေအတွက် အတော်ဆုံးလူတွေကို ငှားရမ်းတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေ စဉ်းစားရမှာက Clients တွေကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ ဆိုတာရယ်၊ သွားရေကျစရာ Legal Contract တွေနဲ့ Agent တွေပါပဲ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် US မှာ law firm တစ်ခု တည်ထောင်ခြင်းက အတော်လေးတော့ အကုန်အကျ များပါတယ်။ သင်က အလုပ်သမား အင်အားစု အများကြီးကို ထိန်းသိမ်းဖို့တော့ မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သင်ရဲ့အဆင့်မြင့် အလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျိုးရှိရှိ ကူညီနိုင်တဲ့ လူတော်တွေတော့ ရှိရပါမယ်။ Company Profile ကောင်းကောင်းလေးနှင့်၊ သေချာ လေ့ကျင့်ထားသော အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော အဖွဲ့ဝင်တွေ သင့်အဖွဲ့မှာရှိမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ဖို့အတွက် အများကြီး ရုန်းကန်စရာ မလိုပါဘူး၊ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုအတိုင်း အာမခံနိုင်မယ့် စိတ်ချရတဲ့ Agent တွေရှိနေပြီပဲ။
IsaLaw Firm Worth Starting from Scratch or is BuyingaFranchise Better?
Law firm တစ်ခုကို ပုံကြမ်းကနေ စတင် ပုံဖော်သင့်သလား?
ဒါမှမဟုတ် Franchise ဝယ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမလား ဆိုတာ လေ့လာ ကြည့်ရအောင်ပါ။ အကယ်၍ သင်က Legal Industry မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Industry မှာ အောင်မြင်တဲ့ Law firm ကြီး တစ်ခုဆီက Franchise (e.g KFC franchise ဆိုရင် KFC ရဲ့ စံချိန် စံညွှန်း အတိုင်း Process တွေအတိုင်း KFC က သင်ကြားပြသမှုတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ရပြီး အဲဒီအတွက် အခကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာကို KFC ကိုပေးရပြီး ကိုယ်က KFC နာမည်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်း) ဝယ်တာမျိုး Law firm ကြီး နဲ့ partner လုပ်တာမျိုး မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနှင့် ကွဲပြား ခြားနားနေတာ ဖြစ်ပြီး နာမည် တစ်ခုနဲ့ ဒီနယ်ပယ်မှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့က နှစ်တွေ အများကြီး ပေးဆပ်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုကတော့ တော်တော်များများက အမျိုးအမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေ ဆွဲဆောင်မှု မက်လုံးတွေ ကြောင့် စီးပွားရေး တစ်ခု စတင်ဖို့ စိတ်အား တက်ကြွနေကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ထိန်းချုပ် လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်ချင်ပြီး သင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်ကလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပေးဖို့၊ အနာဂတ်မှာ Franchise အနေနဲ့ ရောင်းလို့ရမယ်လို့ မျှော်လင့် ထားတယ်ဆိုရင် ပုံကြမ်းနေ စတင် ပုံဖော်လိုက်သင့်တာက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး လောင်းကြေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်က ပိုက်ဆံရဖို့ တစ်ခုပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး ဆထက်တိုးပြီး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနယ်ပယ်မှာ ရှိနေပြီးသား အောင်မြင်ပြီးသား သူတစ်ယောက်နဲ့ ပါတနာ ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။
Possible Threats and Challenges You Will Face When StartingaLaw Firm
(Law firm တစ်ခု စတင်သောအခါ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု တွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ)
ယေဘုယျအားဖြင့် Legal industry မှာ Law firm အဟောင်းတွေရော အသစ်တွေရောက အစိုးရ ပေါ်လစီများနှင့် ကြိုတင် မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ခံနေရပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Law Firm တစ်ခု စတင်တဲ့အခါ မှာ မကြာခင်မှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် နောက်ထပ် ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုကတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုပါပဲ၊ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန် မှာ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။
StartingaLaw Firm – Legal Matters
Best legal entity to use foralaw firm
law firm ဆိုင်ရာ ဥပဒေရပိုင်ခွင့်
သင် သတိပြုမိသည် ဖြစ်စေ မပြုမိသည် ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် law firm တစ်ခု မဖွင့်လှစ်နိုင်ခင်မှာ ပထမဆုံး ချရမယ့် Decision ကတော့ Legal Entity အမျိုးအစားတွေပါ။
ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လေ့လာစရာတွေက လေးနက်ကျယ်ပြန့်လို့ ဂရုပြု လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Liability (ပေးရန် တာဝန်ရှိ) Protection, အခွန်ကိစ္စတွေနှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု အခက်အခဲ မရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုချင်းစီမှာ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။
Law firm တော်တော်များများက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကော်ပိုးရေးရှင်းတွေကဲ့သို့ လည်ပတ်နေချိန် ဖြစ် ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကော်ပိုရေးရှင်းတွေဆိုတာ တိကျတဲ့ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း Entity တွေမှာ Shareholder တွေ၊ Director အဖွဲ့အဝင်တွေ Management Team တွေ ရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး အကုန်လုံးက ကွဲပြားစွာ လည်ပတ်နေကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ Limited Liability Companies (LLCs) ပေးရန် ကန့်သတ်ထားသော ကုမ္ပဏီများ က Unincorporated entities [ For example, in partnerships in England and Scotland are separate entities for accounting purposes, but while English partnerships are not separate legal entities, in Scotland they are separate legal persons The most common and traditional unincorporated entities are sole traders, partnerships, and trustees of trusts, and the more modern unincorporated entities include limited partnerships (LPs) (but not incorporated limited partnerships),limited liability partnerships(LLPs) (but not UK Limited Liability Partnerships which are corporations), Limited liability limited partnership (LLLPs) and limited liability companies (LLCs) ] တွေပါ ဆိုလိုတာက အဲဒီ Companies တွေက ပေါင်းစည်းထားတာ မဟုတ်သော်လည်း Accounting စာရင်းဇယား သဘော အရ သီးသန့် Entities တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (legal entitles အရတော့ သီးသန့်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့် မည်)။
LLC (limited liability companies) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေက ကော်ပိုးရေးရှင်းတစ်ခုရဲ့ ရှယ်ယာဝင်တွေထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေး ပိုရှိပါတယ်။ Sole proprietorships (တစ်ဦးပိုင်) တွေဟာ Unincorporated Entities ပါ။ တစ်ဦးပိုင် လုပ်ငန်းတွေ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ ဖြစ်သည့်အတွက် ကြောင့် Disregarded Entity ( ပုံမှန် LLC တွေက Owner နဲ့ Company နဲ့ ကွဲပြားသော်လည်း တစ်ဦးပိုင် LLC မှာတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်) အနေနဲ့ အခွန်ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက အမြတ်/ အရှုံး အားလုံးကို ပိုင်ရှင်ရဲ့ Tax return (ပြန်အမ်းခွန်) အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက်များကိုကြည့်လို့ မိတ်ဆွေရဲ့ Law Firm အတွက် ဘယ်ဟာက အသင့်လျော်ဆုံးလည်းဆိုတာ အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
- သင့်မှာ ပိုင်ရှင် Owners ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ? သင်က ချဲ့ထွင်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ် ဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု သဘောတူညီချက် LLC (limited liability companies) ကဲ့သို့၊ ခိုင်မာတဲ့ ပါတနာ သဘောတူညီချက် GP(general partnership ), LP(limited partnerships) or LLP (Limited liability limited partnership) or အခြား ပိုင်ရှင်တွေမှ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ Liability မှ မိမိ ကိုယ်ကို ကာကွယ်သော ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု လုပ်ဖို့ လိုပါပြီ။
- Limited liability protection က သင့်အတွက် ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိသလဲ? အခွန် အခတွေ၊ နှစ်စဉ် ကုန်ကျ စရိတ် စသည် Sole proprietorships and partnerships တွေက လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ် နည်းပါတယ်၊ LLCs တွေကတော့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ် အသင့်အတင့် ရှိပြီး ကော်ပိုရေးရှင်တွေကတော့ လုပ်ငန်း လည်ပတ် စရိတ် မြင့်ပါတယ်။
- How much money do you anticipate earning? If the answer is that you anticipate earning less than what you considerareasonable salary, then there’s no real benefit to an S corporation.
- How organized are you? Corporations require recording meeting minutes and annual meetings, all of which are additional layers of formalities to manage.
- Do you plan to sell the entity at any point in the future? How do you plan to accomplish that sale? Stock sale? Sale of all assets? Shares are easier and cheaper to sell than the assets ofacompany. LLC ownership and Partnership ownership is less quantifiable, and therefore, it is typically more complicated and costly to sell an LLC or Partnership.
Catchy Business Name ideas Suitable foraLaw Firm
Law firm အတွက် မှတ်မိလွယ်သော လုပ်ငန်းနာမည် နဲ့ Ideas များနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
When it comes to choosinganame for your law firm,aperson needs to be very careful and meticulous. This is so because law firms are professional entities and it is usuallyagood norm thatacatchy business name can do the magic at times.
မိတ်ဆွေရဲ့ Law Firm အတွက် နာမည် ရွေးဖို့ လိုအပ်လာပြီဆိုရင် သေချာ ဂရုတစိုက် ရွေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Law Firm ဆိုတာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Entities တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မှတ်မိ လွယ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ သတ်မှတ်ချက် လိုပါတယ်။ အောက်မှာ နမူနာအချို့ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Here are some catchy business name ideas you can choose for your law firm;
• Lathrop & Gage (LaGa)
• Blackwell Sanders Matheny weary & Lombard (BlackSand)
• Thompson Cobum (Thomco)
• Husch & Eppenberger (HuschBerger)
• Bryan Cave (B-Cave)
• The Simmons Firm
• Solution providers Inc.
The Best Insurance Policy Needed foraLaw Firm
(Law firm တစ်ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး အာမခံ ပေါ်လစီ)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အခြား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ လိုပါပဲ အခြေခံ အာမခံ ပေါ်လစီတွေ မရှိဘဲ လုပ်ငန်း လည်ပတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Legal industry ရဲ့ သဘာ၀ အရ ကိုက်ညီတဲ့ အာမခံ လွှမ်းခြုံမှု ရှိရပါမယ် အဲဒါမှ မဟုတ်ရင် Case or Agent တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းခဲ့သည် ရှိသော် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လို့မရ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့် အာမခံအတွက် လျာထားငွေ ထားရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်၊ အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်ပွဲစားကို သင့် Law firm အတွက် အကောင်းဆုံး အာမခံ ပေါ်လစီတစ်ခု ရွေးချယ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ သင့် Law firm ရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ရန် ကူညီအကြံပေးရမဲ့ အာမခံ ကိုယ်စားလှယ် ပွဲစားရဲ့တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။
US မှာ ကိုယ်ပိုင် Law firm တစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အခြေခံ အာမခံ ပေါ်လစီ တွေပါ။
အကယ်လို့ မိတ်ဆွေက ကိုယ်ပိုင် Law firm စတင်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် intellectual property ( ဉာဏ်ပညာဖြင့် တီထွင် ဖန်တီးထားသောအရာ မူပိုင် ခွင့်) ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကုမ္ပဏီ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ အခြား စာရွက် စာတမ်းတွေကို ကာကွယ်တာထက် ပိုပါတယ်၊ ဒါတင်မက မိတ်ဆွေရဲ့ Software Applications တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီ နာမည် စတာတွေ ကာကွယ်ဖို့လည်း လိုတာပေါ့။ လုပ်ငန်း သဘောအရရော Law firm တွေ နေရာစုံမှာ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတာ ကြောင့်ရော (Intellectual property) နှင့် Trademark (ကုန် အမှတ်တံဆိပ်) ကာကွယ်မှုတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ရှေ့နေရဲ့ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ချက် လိုအပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Law Firm ထောင်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ လေ့လာ ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါပြီ။
Credit: Startingalaw firm